အမြတ်နိုးဆုံး.. တန်ဖိုးအထားဆုံး PerthSaint Fic များ❤🖤 - Hantylay - Wattpad
အမြတ်နိုးဆုံး.. တန်ဖိုးအထားဆုံး PerthSaint Fic များ❤🖤
Real Owner (ပိုင်ရှင်မှန်) Z&U
109K 7.2K 67
Zawgyi ကျွန်တော်ကြိုးစားသမျှ ပြုမူနေသမျှအရာအားလုံးဟာ ခင်များအတွက်ကြီးပဲ တနေ့ခင်များနားလည်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းမိတယ် #Perth aka Milo ဘာလို့စိမ်းကားသွားရတာလဲ အဝေးကိုတွန်းလွှတ်နေရင်း တခြားတဖက်ရောက်သွားမှာစိုးလို့ ပြန်ဆွဲခေါ်မဲ့လက်ကို စောင့်နေပါတယ် #Saint aka Bunny ညီအရင်းက ကိုယ့်ထက်ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို ပိုဂရုစိုက်တော့ ငါ့ဘ၀ေ...
80.5K 7.3K 71
Zawgyi မင်းကတိမတည်ပဲထားသွားခဲ့လို့ ငါ့ရင်ဘတ်ကြီးစုတ်ပြတ်သတ်ခဲ့ရတယ်... ခုငါ့ရှေ့ပြန်ပေါ်လာတဲ့မင်းကို ငါကခွင့်လွှတ်ပြီ ယုံကြည်နေအုန်းမယ်လို့ထင်နေလား... #Perth သဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်နေသူနဲ့ မပတ်သတ်ချင်ပဲ ပတ်သတ်နေရတယ်... နင့်လိုလူဆီမှာ ငါရှုံးမယ်ထင်နေလား... #Sara ကိုယ်အရမ်းချစ်ရတဲ့သူ့ဆီမှာ ကိုယ်အတွက်အမုန်းမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ခဲ့မိတာ...
96.1K 10.9K 50
Phoenix's Love (Completed)
35.1K 4.1K 36
မင်းအတွက် ငါ့ရဲ့အချစ်တွေဟာ ထာဝရလောင်ကျွမ်းနေမဲ့မီးတောက်လိုမျိုး
67.8K 7K 36
(ချစ်​ခြင်းတို့ရဲ့.......စေစားရာ) အဟတ်​....မထင်​ထားဘူးလူတွေအားလုံး ကိုယ့်​ကိုသဘောကျတယ်​ဆိုပေမဲ့ မင်းတယောက်​ထဲရဲ့အမြင်​မှာကိုယ်​က စိတ်​ပျက်​စရာကောင်းနေမယ်​လို့လေ Perth အခုရှင်းမှနောင်​မရှုပ်​မှာMr.Perth ကိစ္စတစုံတရာ မလိုအပ်​ဘူးထင်​ရင်​ အစတည်းက မပတ်​သက်​တာအကောင်းဆုံးပဲမလား ...
98.6K 7.7K 38
Incidentally Love With Bunny 🐰 & Choux Cream 🍩
75.7K 5.8K 51
SonPin💕 ကိုယ်က SonPin ချစ်သူမို့ SonPinကို❤🖤 ကိုယ့်ခံစားချက်တွေရယ်အပြင်ကခံစားချက်လေးတွေရယ်ပါပေါင်းပြီး ရေးကြည့်မယ်....
🖤Theories of LOVE♥ Season-2
180K 19K 86
🖤Theories of LOVE♥ 🖤Season-2♥ အိမျထောငျသညျဘဝရဲ့. အနှဈသာရခဈြခွငျးမတ်ေတာမြားကို ထငျဟပျစမေဲ့ ficလေးတပုဒျ ဖွဈလာမှာပါ..... ficလေးတပုဒ် ဖြစ်လာမှာပါ.....
🖤Theories of LOVE♥ 🖤Season-3♥ Final chapters
176K 22.8K 171
Final Chapters (သို့) ခဈြခွငျးနိဗ်ဗာနျသို့သှားရာလမျး
71.8K 5.9K 23
Pete...ဘာလို့လဲမသိဘူး မနကျမိုးလငျးရငျ နှုတျခမျးတှနောပွီး လညျပငျးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ အနီကှကျတှဖွေဈနတေယျ Ae...ဘဝခွားနပေမေယျ့ မငျးကို ရယူခငျြမိခဲ့တဲ့အတှကျ ခှငျ့လှတျပေးပါလို့ တောငျးဆိုခှငျ့မြား ရနိုငျမလား Pete...ဘာလို့လဲမသိဘူး မနက်မိုးလင်းရင် နှုတ်ခမ်းတွေနာပြီး လည်ပင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနီကွက်တွေဖြစ်နေတယ် Ae...ဘဝခြားနေပေမ...
ချစ်ခြင်းတရားသာ မှန်ခဲ့လျှင် (Completed)
24.7K 2.2K 27
Idol နှင့် Fan ဇာတ်လမ်းလေးပါ 😍
12.4K 1.3K 25
Inspired by A were wolf boy movie
My Incidental Love Is You💕💕💕💕
💕ဒီထဲက အကြောင်းရာတွေအားလုံးကို ကျွန်မတို့မပိုင်ပါဘူး 💕ကျွန်မဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Series ထဲမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ချန်ထားခဲ့တဲ့ Scene လေးတွေက Sweet ဖြစ်တာရယ် ကျွန်မတို့လိုပဲ တချို့ Fan လေးတွေလည်း သိချင်ကြမယ်ထင်လို့ ဘာသာပြန်ပေးဖြစ်ခဲ့တာပါ 💕တကယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်ကများမူပိုင်ခွင့်နဲ့ ဒီဝတ္ထုကို မြန်မာဘာသာဖြင့် စာအု...
🖤Theories of LOVE♥(Completed)
262K 20.9K 62
အရောငျတှနေဲ့အခဈြတှကေိုအဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုရငျးဘယျသူကဘယျလိုလှမျးမိုးမလဲဆိုတာကို ပွိုငျဆိုငျကွမဲ့ လူသား၂ဦး
40.1K 4.4K 34
ငါးကလေးတဈကောငျက လူသားလေးကို ခဈြမိတဲ့အခါ.... ငါးကလေးတစ်ကောင်က လူသားလေးကို ချစ်မိတဲ့အခါ....
⌁ F A S C I N A T I O N ⌁
132K 9.7K 43
P E R T H S A I N T ╏ P I N S O N ｡ Dark Mystery, Drama and Romance Both Zawgyi and Unicode are available.✔️ Plz read with your own risk . ❌DO NOT ALLOW REVIEWS OR REUPLOAD‼️ |Published time - Aug 16, 2018 to present
54K 3.9K 17